Known Islam Association Myanmar: အစ္စလာမ်နှင့် ပတ်သက်၍ အမေးများသော မေးခွန်းများ
အစ္စလာမ်နှင့် ပတ်သက်၍ အမေးများသော မေးခွန်းများ
တမန်တော် မိုဟာမဒ် ဟူသည်…
တမန်တော် မိုဟာမဒ် (ဆွ) သည် လူသားတို့အား ဖန်ဆင်းရှင်ကို ကိုးကွယ်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရန် စေလွှတ် တော်မူခြင်းခံရသော တမန်တော်များစွာတို့အနက် နောက်ဆုံးတမန်တော် ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လူသားတို့ အတွက် စံပြ ဖခင်၊ ခင်ပွန်း၊ ဆရာ ၊ ခေါင်းဆောင်၊ တရားသူကြီးတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရိုးသားသော၊ တရား မျှတသော၊ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်သော၊ သတ္တိရှိသော လူသားတစ်ဦး၏ ပြည့်စုံသော ဥပမာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တို့သည် တမန်တော်မြတ်အား အထူးဂုဏ်ပေးလေးစား ကြပါတယ်၊ သို့သော် အခြားသော တမန်တော်များနည်းတူ တမန်တော် မိုဟာမဒ် (ဆွ) အားလည်းမကိုးကွယ်ကြပါ။
v အစ္စလာမ်က အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ဘယ်လိုမြင်သလဲ?
အစ္စလာမ်မှာ အမျိူးသားရော အမျိုးသမီးရော မိမိပြုသည့် ကောင်းမှု၊ ဆိုးမှုတို့၏ အကျိုးကို တန်းတူ ခံစားရသည်ဖြစ်၍ ဖန်ဆင်းရှင်ထံတော်၌ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ဟာ တန်းတူပင်ဖြစ် ပါတယ်။ ကျား/မ နှစ်မျိုးလုံးကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော အရှင်မြတ်ဟာ ၎င်းတို့၏ ကွဲပြားမှုပေါ် မူတည်၍ မတူညီသော တာဝန်ဝတ္တရားများကို သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးများကို ရိုသေ လေးစား တန်ဖိုးထားရန် ဆုံးမထားပြီး မည်သည့် ဖိနှိပ်မှုကိုမျှ ခွင့်မပြုထားပါ။
စစ်တိုက်ရာတွင် ရန်သူမဟုတ်သော အပြစ်မဲ့သူများအား ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည် ရက်စက်သော အပြုအမူ ဖြစ်၍ အစ္စလာမ်က ရှင်းလင်းစွာတားမြစ်ထားပါတယ်။ အမှန်တကယ်တွင် အစ္စလာမ်ဟာ မုစ္စလင်မ်တို့အား အပြစ်မဲ့သော လူသားများကိုမဆိုထားနှင့်၊ သစ်ပင်များ၊ တိရစ္ဆာန်များကိုပင် မလိုအပ်ပဲ အလဟဿ ဖျက်ဆီးရန် ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ ဤသည်မှာ အစ္စလာမ်က ချမှတ်ထားသော စစ်ပွဲဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများမှ ဥပမာ တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အကြမ်းဖက်မှုလား၊ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဖိနှိပ်မှုကို တွန်းလှန်ခြင်းလား ခွဲခြားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုနှစ်ခုဟာ အင်မတန်ကွာခြားသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဟလာလ်အစားအစာ ဆိုတာ ဘာလဲ?
ဟလာလ်၊ တရားဝင် သော အစားအစာဆိုတာဖန်ဆင်းရှင်က မွတ်စလင်မ်တို့ကို စားရန် ခွင့်ပြုထားသော အစားအစာ ကိုခေါ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဝက်သားနှင့် အရက်မှလွဲ၍ အများစုသော အစားအစာများနှင့် သောက်စရာများဟာ ဟလာလ် ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအတွက် ကျွဲနွား၊ ကြက်ငှက်များကို လူသားဆန်စွာနှင့် မှန်ကန်စွာ သတ်ဖြတ်ရပါတယ်။ ထိုသို့ သတ်ဖြတ်ရာတွင် ဖန်ဆင်းရှင်၏ နာမတော်ကို ရွတ်ဆို၍ တိရစ္ဆာန်တို့အားလည်း နာကျင်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ဂရုပြုရပါမယ်။